I was phoned kuti ndiuye kuHarare kuma trials ekuonekwa kuti ndaizbudirira here kuenda kutrainiing yekuita security guard. Ini nekamwe kamusikana kepa next door kanonzi Pee kanga kachangopedza Form 6 yako kaidzidza kwaMutoko tese tainge tadanwa kuma trials zvichireva kut taizoenda tese kuHarare.
Takafunobata jongwe muromo takamukira Inter Africa here paMashoko kuti tiribate kuma 3am kwaromukira.
Takapinda mubhazi ndokugara pasame seat Pee aive asina mari yakakwana zvekuti aive atoudzwa naConductor kuti bhazi rikazara unomira nekuti unenge usina kodzero yekugara. Ndakamboda kumubhadharira but nakazoona kuti ukatamba nemabeby anokudya wakasvinura sedemba saka munhu wotongwara.
Bhazi rakatsikwa zvekureesa tasvika paRoy bhazi rakazara nemazivanhu aienda kuEaster yeZion kwaGutu zvikati takashaya pekutarira.
Conductor iwe musikana mutsvuku wekunaka iwe simuka ndambokutaurira kut hauna mari yakwana
I then asked Pee kuti do you mind ukagara pamakumbo angu? Pee only smiled haana chaana chaakataura akango smiler chete apa a aine zvima dimples pamatama apo ummmm. Ndakangomusimudza fast ndichibva ndamugadzika pamakumbo pangu mboro ndokutomira zvayo.
Me don’t worry conductor she is my wife wandichangoroora saka rega ndimutakure nekuti angasvike aneta Harare
Vanhu vari mubhazi vakati bvuuuuu kuseka ko atadza nei kubhadharira mukadzi wake ndovarume vakaomera ka ava
Ini ndainyatsoziva kuti ndikamubhadharira handina mabenefits parwendo ndainge ndapromisa kut ndaizomutengera food neyekudzoka mari.
Paside pedu painge pakagara umwe mudhara aive atotsva hake nehope maybe raive zemo nekuda nezvaiona.
Zvidya zvaPee zvaizva zvakaita yellow soo ummmm.Moketa kuti vakadzi havagone kugara pachair nehembe vanongoda kugara nenyama bedzi🤸🏻‍♀🤸🏻‍♀🤸🏻‍♀🤸🏻‍♀ Pee akagara kaskirt kakabva kakwinyika zvidya zvese ndokusara panze aive akapfeka kaskirt kublack kane kavent kumashure apa aiva aakanyatsotenyama chaiko izvo zvaksmisa mboro yangu zvine simba. Ndaka mubata muzvidya umu ndichiita kunge ndikuzora mafuta ndchikwira low low ndakaona bby achindibata pamusoro pemaoko angu aive netu hairy achipuruziratidza kufila chaiko.
Bhazi rakarohwa Gutu pfuuuuuu tikuienda mboro yakagwinha soo zvine power ndakaona Pee achinyemwereera soo umm kachivhura zipi yangu kachibudisa slowly ndakatora kajacket kangu ndokufukidzirs kuti vanhu vasaone kuti ndeipi ukutambika
Akapinza mboro iya muskirt make sezvo ainyatsozia kuti hapana achationa
Ndakabata zvidya zviya ndakapinza maoko nemujacket ndichikwira kusvika papant ndakagumha pamusoro papant ndakanzwa pKaita churu kuzvimba so ndakasunda pant paside ndokupinza ruoko mukati ndakabata bata so ndakanzwa kanyama kaive neshape yeka spoon keplastic ndikaziva kuti hakuna chimwe chinhu idinji chete iri.
Ndakadhonza mbichana so ndakanzwa kushinyira apa ruoko rwangu rwatove kutsvedzerera zvimunwe.
Ndakamusimudzira mbichana iye achibata mboro achinangisira so akaita yokugarira ndakanwa ichiramba kupinda ndikaziva kuti um wrong direction puuuu kudhodho🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼
Ndaisundura kudivi soo ndikati bby handiise mudhodho ini waita sei
Akasimukira ndokinangisa paya paspoon ndakanzwa spoon iya ichiita kuputira musoro wemboro kunge yakasunga dhuku.
Akaita kugarira mboro ichiti pfeeeeee yeye kuti nyaaa ichinyura ndakangonzwa kuti nwaaaaaaaa naka!
Ziconductor riya ndokutanga daidzira ne microphone richiti 10km kusvika muChivhu tondomira paChicken inn apo toita recess vanoda kugeza nokudya ipapo 30mins tobva taenda Harare manzwa ka Ndakatanga kunzwa kudziya kwemboro mumhata muya hangu. Akaita kurara pandiri achiiiita kunge okotsira so akatora sun hat ndokuvhara kumeso nsokukurunga chiuno hake slowly ndakazonzwa bhazi rati tsvi kumira tainge tasvika muChivhu.
Me bby svabura kani tasvika mutown ngatidye Pee No dady Roc ukunaka haungadaro, Me okay hande kubath uku vhara zip tiende
_*Akasimukira kwakuvhara zip ndokudzisa skirt yake ndokupinda muchicken inn kubath raivako ndokkusviko mubatisa madziro
Ndakainyika nekumashure nyoro ndakatsnga kukoira heavy ndichimhanyidzana nenguva akatanga kuchema
Yes Joe please fuk mee fuuuuk muu fuuuuuuu uuuu uuuu kkkkk please harder harder yesssss yessssssssssssssssss ipapo poioook hoooo fuuuuuukkkkkkkkkkk it nowwwwwwwwwwww yeeees
Bhazi rakarova huta piiiiiiii 5mins handei. Ndakatsnga kikwiza beche semupengo ndakanzwa kobhubha kovibrater iooooooo
iiiiii daaaa dyyy Roc nonaka weeeeee thaaaaaankssss Pee akadaro achitunda ndainge ndakudonha ziya ndichikwiza beche ndakaita kubata chiuno zvekuti hakuna kwaaienda_heeer Peeee. Goooooshhhhhhh hee griiiiii tsaaaa mwaaa HUUU WAAA tsaaaaaaaaaaa eiiiidhhh yuuuuu chiheeeeraa UUUUU shuuugaaaaa mai hweeeeseeddd iiiii _
.aita kusunga beche bhazi rakarova final huta ndakangokwidza bhurukwa rangu ndokumhanya kubhazi iye akahosvuka ndatoudza driver kut amire mukadzi wamgu akunzwa mudumbu ku recess cz naiziva kut haana power
Ndakamusvira Pee Wedinji rarakura kunge mugwaku(spoon)appeared first on Vanodazvinhu.com
Updated: November 27, 2020 — 10:49 pm